Depiote Ralambozafimbololona Fetra “Ataovy ny fanadihadiana momba ny tosika fameno”
Raha ny zava-misy eny amin`ny boriborin-tany fahadimy raha ny tatitra sy fitarainana voaray dia tsy tonga any amin` ireo olona tokony tena hiantefahany ny Tosika Fameno raha ny nambaran` ny depiote Ralambozafimbololona Fetra.
“Misy ireo olona izay tsy tokony hisitraka mahazo. Misy ireo manana fiara, misy no mana-katao. Manahy izahay fa hiteraka fipoahana ara-tsosialy raha izao no mitohy”. Kitrano an-trano no ilazana ny zava-mitranga amin` ity fanampiana ity. “Angatahiana ny fanjakana sy mpandrindra mba hisian` ny fanadihadiana. Tokony hisy fanara-maso sy tomban` ezaka hahaalalana marina hoe firy marina ireo fianakaviana misitraka izany ary iza izy ireo? Sahiko no manambara fa raha misy izay fanadihadiana izay dia hiharihary ny kitrano an-trano. Na ireo komity sy fokontany no miray tsikombakomba , na, mifidy tavan` olona sy akaikin` ny fony. Voahilika tamin` izany ireo mpomba sy mpanara-dian` ny filoha Ravalomannana. Lazaina foana fa ady iraisana ny covid-19”. Hentitra no nilazany fa tsy mandeha araka tokony izy ny Tosika fameno indrindra eny amin`ny faritra atsinanana toy eny Ambatokaranana, Ambohimirary,… Nomarihany fa efa natsipiny nandritra ny dinika tamin` ny praiministra ny hisian`ny fanadihadiana am-pomba ofisialy izay baikon` ny fitondrana. Atao fanadihadiana ireo nandrindra sy nitantanana ireo fanampiana nandritra ny fihibohana. Efa im-polo no nitaky izany kanefa raha tokony ho izy dia tsy tokony hisy andraso andraso ny fanatanterahana izany. Raha ny zava-misy amin` izao, mety herinandro maromaro na volana vitsivitsy mihitsy no hitohizan` izao ady izao ka tsy handaitra ny fihibohana raha hampahory vahoaka raha toa tsy tonga any aminy ny fanampiana, hoy hatrany ity depiote ity.